ISekhukhune idedele isibhaxu esinzima kuSuthu - Impempe
ISekhukhune idedele isibhaxu esinzima kuSuthu
October 27, 2021 Impempe.com
ISekhukhune United imangaze AmaZulu FC iwashaya ngo 2-0 emdlalweni weDStv Premiership e-Emirates Airline Park, eGoli, ngoLwesithathu.
Leli qembu elisanda kufika kwiPremiership belivutha lingabaselwe ngoLwesithathu ikakhulukazi ngesiwombe sesibili lapho lishaye khona la magoli. Beziye ekhefini zibambene ngo 0-0 kodwa iSekhukhuna yakushintsha konke lokho ngesiwombe sesibili.
Igoli lokuqala lishaywe uWillard Katsande, obedlalela iKaizer Chiefs, ngomzuzu ka-48. Kuthe Usuthu lusazama izindlela zokubuyela emdlalweni wabuya uChibuike Ohizu ngomzuzu ka-51 washaya igoli lesibili lesiKhukhune. Kuvele kwacaca ukuthi Usuthu luzokuthola kunzima ukubuya kulo mdlalo.
Ngemuva kwalokho kugqame ukucanuka okuyisimanga ebhentshini loSuthu, ikakhulukazi kumqeqeshi uBenni McCarthy. Bekuthi akazibulale uma abadlali benza amaphutha bebe bevele belandela ngemuva ngo 2-0.
Ngomzuzu ka-67 kucisho kwangena igoli lesithathu uPogiso Mahlangu esebhekene ngqo noVeli Mothwa, unozinti waMaZulu. Kugcine ngokuthi uMahlangu akhishwe ngekhadi elibomvu kulandela ukukhahlela uMothwa eselibambile ibhola.
AmaZulu azamile ukwenza izinguquko ukuze abuyele emdlalweni kodwa kwagcina kungalunganga. Ukushaywa koSuthu kuchaza ukuthi lusakwaze ukuwina imidlalo emibili kuphela kule sizini. Lugcine ukuwina lubhekene neTS Galaxy ngo-Okthoba 19.
Ngakolunye uhlangothi iSekhukhune bese iwina umdlalo wesithathu kulandelana. Igcine ishaye iCape Town City ngo 1-0 ngo-Okthoba 16 njengoba isilandelisa ngoSuthu nje. Leli qembu linyukele endaweni yesine ngokuwina ngoLwesithathu.
Previous Previous post: UBavuma akanankinga nesinqumo sikaDe Kock sokungaguqi
Next Next post: Isagqoza iwini kwiGallants emidlalweni yeDStv Premiership